DHAGEYSO:-QAYBTII 1AAD ATHIINY MO’OSHIITTHY | warsanradio baydhabo
Home MO’OSHIITTHY	DHAGEYSO:-QAYBTII 1AAD ATHIINY MO’OSHIITTHY
written by warsan radio 20/12/2016
Waxaa jira waxaad ogtahay oo haddana moogtahay oo u baahan in lagu xusuusiyo si aad u ogaato qiimaha ay leeyihiin. Hadaba iyadoo taas laga duulayo ayaan idiin diyaarinay xubin aan ugu magic darnay “ADIINY MO’OSHIIDY”. Waa xubin ka hadlaysa taxanaha taariikheed ee bulsha weynta degta inta u dhaxaysa labada webi ee Jubba iyo Shabeelle, sida dhismooyinka taariikhiga ah,
Haldooradooda hadeey ahaan lahaayeen abwaano, fanaaniin,dhaqaatiir,wariyayaal, macalimiin iyo muhandisiin kuwaasoo taariikh iyo maamuus xusuus mudan ku leh bulshada balse adiiny mo’oshiidy.
Qayta koowaad ee xubintan taxanaha “ADIINY MO’OSHIIDY”. Waxaan Ku bilaabaynaa al fannaan abwaan al mulaxan haldoor Muxsin Qaasim Qaalib(Jaakoole) haddii lagu weydiyo muxsin heesha uu alifey ee uu ku luuqeyo maxey ubadaan yihiin waxaa laga yabaa in aad taqaano hadana moogtahay sidaas darted waxaad ubaahan tahay in aad maqasho mid kamid ah heesa hiisa taasoo xaqiiqdii uu abwaanka kaga waramaayo xanuunka ay leedahay marka ehel meel wada daga is coladiyaan cawaaqib(Cirib xumada) xumada ka dhalankartaa iyo cadowga sida uga faa”ideysankaro colaadooda.
Kilip hees hilimo
Marka aad maqashay hadda heesta madareentay nuxulka heesta waxa ay kahadleyso ee abwaanka habeen iyo maalin kaseexan waayey ee ah dhibaatada colaadahaan ay leedahay iyo sida aayaha ugu keenikarto dabar go dadka iyo duunyo lagu waayo taasoo ugu dambeyn keeni karto in labo isduugta lawaayo dhuulka iyo dhirtiisa cid kale dhaxasho.
Abwaan jaakoole dangaar ah kama laheeyn ee wuxuu kalahaa dan guud ah.
Hubaal waayo in abwaan muxsinqaasin jaakoole yahay Xariir la xuso marka aan dib ugu noqoney murtida xambaarsan hulada damaqa iyo dareenka leh ee uu ku cabirey colaadaha sokeeye ee beel beel isu diriirka u dhaxeeyey ehelka isma hurtada ah ee aan sina u kala maarmin.
Balse ayaan darada ayaa waxey tahay hilimo maalmeed ayey ku jireen umadu uu abwaanku u curiyey heesta oo ah adiga mid aadan fahmin qiimaha haldoorkan oo xagaaga ka ah mid s raqiis ah balse waa abwaan jira oo tariiqda wax qorta baal dahab ah kaga jira,
DHAGEYSO:-QAYBTII 1AAD ATHIINY MO’OSHIITTHY was last modified: January 16th, 2017 by warsan radio
Akriso:-Ra’iisul Wasaare Kheyre oo xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dalka Hindiya